बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट थप ८ जनाको मृत्यु- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट थप ८ जनाको मृत्यु
जेष्ठ १३, २०७८ रुपा गहतराज
बाँके — बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट बुधबार राति ८ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरुमा बाँके, बर्दिया,दाङ, कञ्चनपुर, कैलाली छन् । त्यसमध्ये तीन जना बाँकेका हुन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २० का ५७ वर्षीय पुरुषको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । वैशाख १९ गते कोरोना पुष्टि भएका उनलाई जेठ ३ गते भर्ना गरिएको थियो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २० कै ५५ वर्षीया महिलाको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । उनलाई ६ गते भर्ना गरिएको थियो ।
यस्तै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का ७३ वर्षीया महिलाको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । उनी वैशाख २७ गते भर्ना भएकी थिइन् ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का ७४ वर्षीया महिलाको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । उनलाई जेठ ३ गते भर्ना गरिएको थियो ।
बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर ५ का ७५ वर्षीया महिलाको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । उनलाई ११ गते भर्ना गरिएको थियो ।
कञ्चनपुर पुनर्बास नगरपालिका वडा नम्बर ६ का ४७ वर्षीया महिलाको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । उनलाई १८ गते भर्ना गरिएको थियो ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का ५६ वर्षीया महिलाको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । उनलाई ११ गते भर्ना गरिएको थियो ।
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ५ का ८० वर्षीय पुरुषको भेरीमा मृत्यु भएको छ । जेठ १२ गते पीसीआर गरिएका उनलाई त्यही दिन भर्ना गरिएको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७८ १०:३१
जेष्ठ १, २०७८ रुपा गहतराज
बाँके — बाँकेमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा ९ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज वलीका अनुसार बैजनाथ गाउपालिका वडा नं. २ का ३७ वर्षीया महिला, कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ४ का ४२ वर्षीय पुरुष, बर्दिया ठाकुरबाबाका ४६ वर्षीय पुरुष, बर्दिया ठाकुरबाबाका ३४ वर्षीया महिला, कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ९ का ६१ वर्षीय पुरुष, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ का ३९ वर्षीय पुरुष, सल्यान कुपिन्डेका ६० वर्षीया महिला, बर्दिया गुलरियाका ६० वर्षीय पुरुष, बर्दिया मधुवनका ४० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो ।
बाँकेका दुई ठूला अस्पताल भेरी र कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उनीहरुको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
योसँगै बाँकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने २ सय २९ पुगेका छन् भने बाहिरी जिल्लाबाट यहाँ उपचार गराउन आउँदा १ सय ७६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७८ १२:३६
गुल्मीमा एम्बुलेन्स चालकमाथि कुटपिट, दुई जना पक्राउ